China Pet Collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Izinga lokumuncwa nokuguqulwa le- isilwane collagen iphakeme ngama-97.5%, futhi inokubukeka okuhle. Ngemuva kokuyisebenzisa, ingakhuphula izinga lokubuya kokuphakelayo futhi yehlise izindleko zokudla ngokufanele.
I-pet collagen kungokwamaphrotheni wezilwane e-collagen, anomphumela wesikhumba nezinwele ezondlayo. Uma isetshenziswa ekuphakelweni kwesilwane esinoboya, i-proline yayo ecebile ne-glycine ingakuthuthukisa kakhulu ukubonakala koboya besilwane futhi ngokusobala ithuthukise ibanga loboya.
Ukubukeka I-powder elikhanyayo eliphuzi
Ukuncibilika 2% ukucaciswa kwesixazululo samanzi
Amaprotheni,% (w / w) > 85
Umlotha,% (w / w) <10
Umswakama,% (w / w) <6
Hola mg / kg .50.5
I-Arsenic mg / kg .50.5
I-Chromium mg / kg .50.5
PH (1% isixazululo) 5-8
Izibonelo zohlelo lokusebenza zomkhiqizo embonini yokudla kwesilwane
Ukungeza i-1% -3% isilwane i-collagen kokuphakelayo kungabonakala kuthuthukisa umphumela we-granulation. Kukulungele ukudla kwasemanzini, okungagcini nje ngokuthuthukisa okuqukethwe kwamaprotheni ongahluziwe, kepha futhi kusiza ukondliwa kwezinhlanzi nezimfanzi, kuthuthukisa isilinganiso sokusetshenziswa kokuphakelayo futhi kuvimbele ukungcoliswa kwamanzi.
2. Ukudla kwezilwane ezifuywayo
I-pet collagen ikhishwa emithonjeni ehlukene yezilwane futhi ingahlukaniswa ngokunambitheka kwenkukhu, ukunambitheka kwedada, ukunambitheka kwenkomo, njll. Ekudleni kwezilwane, kungathatha indawo yokudla okwenziwe ngqo ngenkukhu yendabuko nenyama yedada, futhi kungakusindisa kakhulu izindleko zokukhiqiza; Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwayo okuncane kwe-peptide kungaphezu kwama-90%, okuqhubeka kuthuthukisa izinga lokumunca kokudla kwesilwane.
Imininingwane yokupakisha ingakhethwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Lo mkhiqizo kufanele ugcinwe endaweni yokugcina impahla epholile, eyomile nenomoya. Naka ubufakazi bomswakama, ubufakazi bezinambuzane nobufakazi begundane bungaqinisekisa ikhwalithi ezinzile yezinyanga ezingama-24.
Langaphambilini I-Collagen Yezimboni
Olandelayo: I-Gelatin yama-capsule aqinile